टाटा समूहका पूर्वअध्यक्ष रतन टाटाले किन विवाह नगरेका होला ? कारण यस्तो रहेछ - Aarthiknews
टाटा समूहका पूर्वअध्यक्ष रतन टाटाले किन विवाह नगरेका होला ? कारण यस्तो रहेछ
एजेन्सी । टाटा समूहका पूर्व अध्यक्ष रतन टाटाले कहिल्यै कसैसँग विवाह गरेनन् । तर उनको जीव्नमा कसैलाई कहिले पनि प्रेम भने नगरका भने होइनन । भारतीय एक टीभीको अन्तर्वार्तामा उनले आफैंले आफ्नो प्रेम जीवनको उल्लेख गरेका थिए । उसको जीवनमा प्रेमले एउटा मात्र होइन चार पटकसम्म ढकढक्याएको थियो । ती सबै प्रेमहरु कठिन समयमा तिनीहरूको सम्बन्ध कमजोर भए । यसपछि रतन टाटाले फेरि कहिले पनि विवाहको बारेमा सोचेन । रतन टाटाको ८३ औं आज हो ।
प्रसिद्ध भारतीय व्यवसायी रतन टाटाको जन्म १९३७ डिसेम्बर २८ भारतको सूरतमा भएको थियो । टाटा समूहका पूर्व अध्यक्ष भएर समूहले छुट्टै उच्च पहिचान बनाएका थियो र राम्रो स्थान पनि प्राप्त गरेका थिए । उनले टाटा समूहलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने काम गरे । रतन टाटाले व्यापारको विश्वमा धेरै नाम कमाए तर उनको व्यक्ति जीवनका प्रेमको मामलामा असफल साबित भए ।
एउटा टिभी च्यानललाई गरेको अन्तर्वार्तामा अविवाहित उद्योगपति रतन टाटाले पनि आफ्नो प्रेम जीवनको बारेमा खुलासा गरेका थिए । उनले भने, ‘उनी पनि प्रेमामा थिए ।’ तर उनको प्रेम विवाहमा भने परिणत हुन सकेन ।
टाटाले भने, जीवनको लामो यात्रका बारेमा सोच्दा उनलाई लाग्छ किन अविवाहित हुनु उनको निम्ति राम्रो भयो किनकि यदि उसले विवाह गरेको भए परिस्थिति धेरै जटिल हुने थिए होला । उनले भने, ‘यदि मलाई कहिले पनि प्रेम गरे भनेर सोध्यो भने, मैले उक्त प्रेमका कारण चार पटकसम्म विवाहको नजिक पुगेर फर्कि । हरेक चोटि केही डरले मलाई पछि हट्न बाध्य बनायो ।’ आफ्नो प्रेमको दिनको बारेमा कुरा गर्दै टाटाले भने, “जब म अमेरिकामा काम गर्थें, म प्रेमको बारेमा सबैभन्दा चिन्तित थिएँ र म भारतमा फर्केर आएकोले उक्त विवाह गर्नबाट बचे ।’
रतन टाटाको प्रेमिकाहरु भारत आउन चाहेनन् । उही समयमा भारत–चीन युद्ध पनि सुरु भयो । अन्तमा, उनकी प्रेमिकाको अमेरिकामा कसैसँग विवाह भयो ।रतन टाटा समृद्ध परिवारका सदस्य थिए । तर उनको जीवन त्यति सजिलोसँग वितेको भने थिएनन । ७ बर्षको उमेरमा रतन टाटाको परिवार अलत गएको थियो । उनलाई उनकी हजुरआमाले हुर्काइन् ।
रतन टाटा कारका धेरै सौखिन थिए । रतन टाटाको सुपरिवेक्षणमा टाटा समूहले ल्याण्ड रोभर, जगुआर, रेंजरोभर अधिग्रहण गर्यो । लखनकिया कार टाटा नानोको उपहार दिएर रतन टाटा पनि थिए । रतन टाटा विमान उडान र पियानो बजाउन पनि मन पराउँछन् ।
आफ्नो सेवानिवृत्ति जीवनमा उनले भनेका थिए अब मेरो सपना पुरा गर्न चाहान्छु । अब म पियानो बजाउँनेछु र वीमान उडानको मेरो शौखलाई पूरा गर्नेछु ।भारत सरकारले रतन टाटालाई पद्मभूषण (२०००) र पद्म विभूषण (२००८ड) बाट सम्मानित गर्यो ।